साफ यु–१८ फुटबलका लागि नेपाली टोली छनौट, को–को परे ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
साफ यु–१८ फुटबलका लागि नेपाली टोली छनौट, को–को परे ?
२८ साउन, काठमाडौं । नेपालमा आयोजना हुने तेस्रो संस्करणको साफ यु–१८ च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि नेपालले प्रारम्भिक चरणमा ३० खेलाडी छनोट गरेको छ । नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले आज प्रशिक्षणमा रहेका ४६ खेलाडीमध्येबाट प्रारम्भिक चरणमा ३० खेलाडी छनोट गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले जनाएको छ ।
प्रशिक्षणमा आएका ४६ खेलाडीमध्ये पहिलो चरणमा १६ खेलाडी टिमबाट बाहिरिएका हुन् । साफ यु–१८ फुटबल च्याम्पियनसिप आगामी असोज ३ देखि १२ गतेसम्म हुनेछ । छनोट हुने खेलाडीमा गोलरक्षक विशाल सुनार, रोहित कार्की, सूर्य अधिकारी र पुजन होना छन् । त्यस्तै डिफेन्डरमा विशाल बस्नेत, रन्दिप पौडेल, पदम भट्टराई, अशिम गुरुङ, सुजन शर्मा, नवीन गुरुङ, रोहन दोङ, विश्रान्त बस्नेत, एरिक लिम्बू र एन्जल महर्जन छन् ।
Previousस्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो– डेङ्गुले ४० जनाको मृत्यु
Nextकश्मीर मुद्दामा ट्रम्पले मध्यस्थताको प्रस्ताव नगरेको दाबी